कोरोनाका बिरामी अस्पतालमा छट्पटाउँदै, आफन्त अक्सिजनको लाइनमा ! - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ बैशाख ३०, बिहीबार ०८:१९
‘खै खै कति रुपैयाँ हो, मेरो बिल काटिदिनुस्’ काँधमा बोकेको अक्सिजन सिलिन्डर भुईंमा बिसाउँदै एक युवक बोल्छन् । टेबलमा बिलप्याड र हातमा कलम बोकेर कुर्सीमा बसिरहेकी महिला ३५० रुपैयाँ माग्छिन् । ती युवक गोजीबाट हजारको नोट झिकेर थमाउँछन् ।
‘खै चानचुन (खुद्रा) ल्याउनुस्, यसको खुजुरा छैन । ती युवकले पर्स हेर्छन्, गोजी खोतल्छन् । तर खुद्रा पैसा भेट्टाउँदैनन् । ‘खै छिटो फिर्ता दिनुस्, अक्सिजन लग्न ढिलो भएर आमालाई केही नहोस्’, उनी थोरै आक्रोशित हुन्छन् ।
अस्पतालले आमाको उपचारका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्ने जानकारी मात्रै दिएन त्यसको व्यवस्था बिरामीका आफन्तले गर्नुपर्ने शर्त राख्यो । जेनतेन गोपालले सानो सिलिण्डर जुटाए । ‘सिलिण्डर पाइयो, अब अक्सिजन कहाँ खोज्ने रु’ गोपालले अस्पतालका चिकित्सकदेखि आफ्ना चिनजानका धेरैलाई सोधीखोजी गरे ।
‘अस्पतालबाट कतिपटक फोन आइसक्यो, यो खेलाँची होइन नि’ उनले भने, ‘मेरो आमालाई केही भयो भने‘’ उनी दुःखी देखिए । आमा अस्पतालमा कोरोनासँग जुधिरहेकी छिन्, छोरा ग्याँसको बन्दोबस्तीमा ।
‘ज्यान भन्दा ठूलो के छ र रु तर यहाँ त अस्पतालमा छटपटाइरहेका बिरामीको मतलव कसैलाई छैन’, जनमैत्री अस्पतालमा बिरामी छाडेर अक्सिजन लिन आएका युवाले दुखेसो पोखे । जनमैत्री अस्पताल नजिकै छ, तर अक्सिजन भर्ने पालो कतिबेला आउने हो ठेगान छैन ।
‘जम्मा एउटामात्रै सिलिण्डर थियो त्यो सकिन लाग्यो, अहिले अर्को सिलिण्डर खोजेर भर्न आएको खै कतिबेला पालो आउँछ’, उनले भने । ती युवक अक्सिजन भर्ने पर्खाइमा बसेको एक घण्टा भयो । तर त्यो एक घण्टा एक महिना जत्तिकै महसुस भइरहेको उनी सुनाउँछन् । ‘अस्पतालमा बिरामीको अवस्था गाह्रो छ, एक घण्टा भनेको थोरै समय हो र यस्तो बेलामा ?’, उनी भन्छन् ।
३८ वर्षीया पूजा बस्नेत आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुरमा कोरोनासँग जुधिरहेकी छिन् । पूजाका लागि अक्सिजन लिन छिमेकी विष्णु खड्का बालाजु आइपुगेका छन् । अक्सिजन पाउन ठूलै युद्ध लडेझैँ भइरहेको उनले सुनाए । बल्लतल्ल एक सिलिण्डर भरेका छन् । तर अब यो सकिएपछि भर्न नपाइएला भन्ने ठूलो चिन्ता उनलाई छ ।
सिलिण्डर नहुनेलाई तनाव : ‘प्रशासन कता हो रु लौन मलाई देखाइदिनुस्’, अलि चाम्लिङले उद्योगको मूल गेटमा उभिएका सुरक्षा गार्डलाई भने । चाम्लिङ सिलिण्डरको खोजीमा त्यहाँ आइपुगेका थिए । उनले दर्ता गर्ने ठाउँमा सिलिण्डर खोज्दै आएको सुनाए । सिलिण्डर नपाउने जवाफ पाएपछि उनी उद्योगको प्रशासन शाखा खोज्दै हिंडेका रहेछन् ।
‘मेरो आमालाई कोरोना लागेको छैन, तर पुरानै रोगले अक्सिजनकै सपोर्टमा राख्नु परेको छ’ उनले भने, ‘अब सरकारले अक्सिजन नदेऊ भन्यो भने मेरो आमालाई मैले कसरी बचाउने ? तस्विरः आर्यन धिमाल / अनलाइनखर
एमालेका चार नेतामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता